Sida Loo Koriyo Ganacsadaha
Bogga horeGanacsi Talo
Sidaad ogtahay, carruurtu waxay la mid noqdaan waalidkood. Haddii aad leedahay ganacsi, ilmahaagu waxay u badan tahay inuu noqdo ganacsade marka ay koraan. Laakiin xitaa haddii qofna uusan lahayn ganacsi u gaar ah qoyskaaga, waxaad samayn kartaa in carruurta habdhaqanka saxda ah ee lacagta iyo habka ay u helaan lacag, kobciyaan hab hal abuur leh si ay u shaqeeyaan iyo in la hubiyo mustaqbal ifaya.
Maxay waalidkaa kaaga sheegeen dhaqaalaha? Hubaal lacagtaas waxaa loo bixiyaa shaqada la qabtay. Dad badan ayaa la yimaadda hab abaal-marin ah oo carruurtooda la siinayo. Tusaale ahaan, soo saarista qashinka, nadiifinta aqalka iyo samaynta buundada xusuus-qorka, ilmuhu wuxuu helayaa xoogaa lacag jeebka ah.
Xusuusashada abaal-marinahaadi yaraantii, waxaad ogaan doontaa inaad wax yar ka heshay shaqada. Way caddahay in waalidkaa uu ku quudin jiray, ku huwin jiray oo uu ku kharash gareeyay wax ka badan intii aad ka soo kaban lahayd shaqada guriga, laakiin waa sannadaha hore ee nolosha in hab-dhaqanka lacagta iyo siyaabaha loo kasbado ay hoos u dhigto.
Ma laga yaabaa inay mudan tahay in dib loo eego nidaamka lacag bixinta ee ilmahaaga si loo sameeyo dabeecad sax ah oo ku wajahan shaqada iyo dhaqaalaha isaga?
Halkan waxaa ah casharro wanaagsan iyo kuwo xun oo muujinaya xiriirka ka dhexeeya barbaarinta iyo dabeecadaha shaqada dambe.
1. Lacag ku hel wakhtiga iyo hawlaha
Shaqaalaha mushaharka qaata waxay wakhtigooda ka iibiyaan ganacsatada si ay u dhamaystiraan hawlaha qaarkood. Waxaad timi xafiiska, samee waxa aad rabto, 8-10 saacadood oo lacag ayaad ku helaysaa.
Qofka shaqaalaha ah, badeecada uu iibinayo waa wakhti. Dhibaatadu waxay tahay, ma samayn kartid lacag haddii aadan haysan (jiro ama dhaawac dartiis). Haddii shirkaduhu ay ka caga jiidayaan inay iibsadaan wakhtigaaga sababtoo ah ma haystaan ​​hawlo ku filan, markaa ma heli doontid shaqo iyada oo aan loo eegin kartidaada.
Ganacsatadu waxay iibiyaan fikrado iyo alaabooyin. Mushaharkooda laguma siiyo wakhti iyo tacab, balse waxa la siiyaa fikradaha ay la yimaadaan si ay dadka u xalliyaan mashaakilkooda oo ay shaqo ugu helaan. Waxay abuuraan shirkado iyo nidaamyo lacag sameeya oo aan ku lug lahayn ganacsade.
Adiga oo lacag siiya ilmahaaga si uu u qabto hawlaha guriga, waxaad siinaysaa tusaale ah in dakhligu ku salaysnaan karo oo keliya wakhtiga iyo hawsha, laakiin xaaladdu sidaas maaha.
2. Samee ugu yaraan
Ilmo ahaan, qof kastaa wuxuu rabaa in uu si dhakhso ah u qabto shaqada si ay u ciyaaraan. Ilmuhu kuma faano waxa uu sameeyay, sababtoo ah waxa la siiyaa mushaharka wakhtiga. Waalidiintu waxay inta badan ku canaanan carruurta tayada liidata ee waxqabadka, laakiin carruurtu waxay rabaan inay wax walba si degdeg ah u sameeyaan, ka takhalusaan oo ay illoobaan.
Habdhaqankan shaqada ayaa inta badan loo qaadaa qaan-gaarnimada: shaqaaluhu iskuma dayaan inay si fiican u qabtaan shaqada sababtoo ah waxay qaataan mushaharka waqtiga, ma xiiseynayaan natiijada. Dabcan, qof kastaa ma sameeyo tan, laakiin qaar badan ayaa sameeya.
Dhanka kale, ganacsatadu waxay isku dayaan inay shaqada u qabtaan sida ugu wanaagsan ee ay awoodaan. Dareenkooda ganacsi iyo tayada waxqabad waa maalgashi mustaqbalka. Baaxadda dakhligoodu waxay si toos ah ugu xidhan tahay sida saxda ah ee ay wax walba u sameeyaan.
3. Marka hore shaqee, ka dibna madadaalo
Haddii aad lacag ku hesho dhamaystirka hawlaha, noloshu waxay u qaybsantaa laba qaybood. Mid ka mid ah iyaga ka mid ah, shaqada, taas oo loo arko sida sharka lagama maarmaanka ah, iyo tan labaad, madadaalo.
Markaad lacag siiso ilmahaaga si uu u nadiifiyo oo u soo saaro qashinka, waxaad samaynaysaa dabeecadaas. Qof kastaa wuu ogyahay in farxadda qofka ay tahay in shaqadu ay farxad keento. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha mushaharka, si kastaba ha ahaatee, inta badan waxay leeyihiin sifadan: inay sugaan usbuuca oo dhan maalmaha fasaxa ah fasax ahaan, oo ay tixgeliyaan Isniinta maalinta ugu xun toddobaadka.
Ganacsatada, ugu yaraan kuwa wanaagsan, ma laha dabeecaddan. Ganacsatada dhabta ah waxay ka dhigaan rabitaankooda shaqo mana shaqeeyaan kaliya dhamaadka usbuuca. Waxay u nool yihiin inay xalliyaan dhibaatooyinka oo ay abuuraan fursado.
Haddaba, waxa aan halkan idiinku soo gudbinaynaa saddex cashar oo kaa caawin doona in aad u barbaariso ubadkaaga qof rafaadsan oo aan hawshiisa jeclayn oo toddobaadka oo dhan sugayay Jimcaha. Haddii aad ku beerto ruux ganacsi oo isaga ku jira, sawirkani wuu isbedeli karaa.
1. Waajibaadka oo aan la bixin
Halkii aad ka bixin lahayd ilmaha shaqada guriga, waxaad u baahan tahay inaad u sharaxdo in kuwani yihiin mas'uuliyad qoys oo kaliya oo uu isagu ka masuul yahay. Waalidiintu sidoo kale waxay qabtaan hawlaha lagama maarmaanka ah, sidaas darteed wax walba waa cadaalad.
Farxadda kaliya ee uu ilmuhu ka heli karo shaqada guriga ma aha abaal-marin lacageed, laakiin ku qanacsanaanta xaqiiqda ah inuu sameeyay wax wanaagsan. Waa inuu fahamsan yahay in masuuliyaddu tahay qayb lagama maarmaan ah oo nolosha ka mid ah.
2. Lacag lagu xalliyo dhibaatooyinka
Si aad u baro ilmahaaga inuu si ballaadhan u fikiro oo uu u helo habab uu lacag ku kasbado, waxaad u sharaxi kartaa inaad bixin doonto oo kaliya si aad u xalliso dhibaatada. Ha helo meel ka baxsan mas'uuliyadda saaran oo si uun loo hagaajin karo.
Tusaale ahaan, haddii ilmuhu dareemo in gaarigaagu wasakh yahay oo uu ku soo bandhigo inuu dhaqo, waxaad ku heshiin kartaa inaad bixiso adeeggiisa. Meesha balakoonka ama armaajooyinka ka nadiifi waxyaabaha duugga ah, ku samee wax kale oo casriyeyn guriga, u ogolow ilmahaagu inuu raadiyo dhibaatooyin la xalin karo si taas lacag looga sameeyo.
Dabeecadda noocan oo kale ah ayaa si weyn u caawin doonta qaan-gaarnimada, sababtoo ah tani waa dhab ahaan waxa ganacsatadu ay sameeyaan: waxay helayaan dhibaatooyin ama dhibaatooyin, ciribtirka taas oo aad lacag ka heli karto.
3. Ganacsiga weyn wuxuu u baahan yahay qorshe weyn.
Waa suurtogal in ilmuhu, ka fekerayo sidii uu lacag u heli lahaa dhibaatada, uu helo hab uu lacag ugu sameeyo shay mar kasta. Tani waxay noqon kartaa caawimo joogto ah oo aan ka mid ahayn shaqadiisa, ama xitaa meel ka baxsan guriga.
Hawshaadu waxay noqon doontaa inaad u sharaxdo sharciyada aasaasiga ah ee ganacsiga ilmahaaga. Waxaas oo dhan waxaa lagu samayn karaa qaab ciyaar madadaalo ah.
Tusaale ahaan, waxaad u sheegi kartaa ilmahaaga wax ku saabsan maalgelinta ganacsi, taas oo ah, u sharax inaad u baahan tahay inaad u soo iibsato alaabta ganacsigaaga. Si aad u yeelato macaamiil, wuxuu u baahan doonaa xayaysiis, waxaadna ka fikiri kartaa fikradda suuq-geynta.
Haddii aad ganacsi ku jirto, kuma adkaan doonto inaad u sheegto ilmahaaga dhammaan dhinacyada ganacsigiisa yar. Tani waxay bari doontaa ilmahaaga qorshaynta ganacsiga.
4. Noloshu waa shaqo iyo ciyaar isku mar
Carruurtu waxay jecel yihiin inay dhisaan: waxay si buuxda u wada baabbi'iyeen lebenkii Lego iyo prefabs.
Isticmaalka tusaalahan, ilmaha waxaa lagu sharxi karaa in fulinta mashaariicdooda ay la mid yihiin ciyaar xiiso leh oo aad lacag ku heli karto haddii aad hesho fikrado xiiso leh.
Dabcan, ilmo kastaa wuxuu u baahan yahay hab u gaar ah. Fikradaha kor ku xusan waa kaliya jihada lagu horumarinayo nidaamkaaga abaal-marinta.
Ogsoonow in barbaarinta noocaas ahi aanay dammaanad qaadin in ilmahaagu hubaal furi doono ganacsigiisa. Laakiin habka hal-abuurka ah ee habka loo kasbado iyo habdhaqanka saxda ah ee shaqada ayaa hubaal ka caawin doona qaan-gaarnimada.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida Loo Koriyo Ganacsadaha!